faritra - Gazety "Rafitra ovy"
Tena Label ny faritra
Label: ny faritra
Fambolena ovy tany amin'ny faritr'i Samara
Alexander Nacharov, solontenam-paritra ho an'ny faritra Volga, GRIMME-RUS LLC Maherin'ny 500 ireo orinasa mpamboly amin'ny endriny maro samihafa izay miasa tsara ao amin'ny faritra Samara ...
Tombo-maniry ny faritr'i Tomsk
Faritany: 314,4 arivo sq. km. Mponina: olona 1 tapitrisa 47. Toerana jeografika: ny faritra dia eo amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Siberia Andrefana. ...
Evgeny Tyustin, solontenan'ny GRIMME-RUS ao amin'ny Distrikan'ny Ural Federal Ny Faritra Sverdlovsk dia miorina eo amin'ny fihaonan'ireo faritra roa eto an-tany - Eropa sy ...
Potika mitombo amin'ny faritra Sverdlovsk
Ny ovy maniry any amin'ny faritr'i Sverdlovsk Tamin'ny vanim-potoana lasa, ny orinasa fambolena any amin'ny faritr'i Sverdlovsk dia namboly ovy tamin'ny velaran-tany 13,9 hekitara. Vokatra antonony ...
Mikhail Tremasov, solontena isam-paritra ho an'ny distrikan'ny federaly siberia ary ny atsinanana, GRIMME-RUS LLC Ny faritry ny Faritra Kemerovo dia an'ny faritry ny fambolena atahorana. ...
Vokatra potika avy amin'ny faritra Kemerovo
Faritany: 95,5 arivo sq. km. Mponina: olona 2 tapitrisa 709. Toerana jeografika: ny faritra dia eo atsimo atsinanan'i Siberia Andrefana. Amin'ny ...
Potika nitombo eny amin'ny faritra Leningrad
Faritany: 83 908 km2. Mponina: 1 791 916 ny olona, ​​ary 64,04% no mponin'ny tanàna. Toerana jeografia: ny faritra Leningrad dia misy ...
Tombo-maniry ny faritr'i Saratov
Ny faritr'i Saratov dia any atsimo atsinanan'ny faritra eropean'i Russia, any amin'ny faritra avaratry ny faritra Volga Ambany. Mivelatra hatrany andrefana ka hatrany atsinanana ...
Potika nitombo eny amin'ny faritra Penza
Ny faritra dia miorina eo amin'ny Lemak'i Eoropa Atsinanana, ao anatin'ny Volga Upland. Faritra 43, 3 sq. km. Ny faritry ny faritra manomboka any andrefana ka hatrany ...
Mandrakizay ny VIP
Tao an-tokantranon'ny Repoblika Tatarstan, dia nanomboka nandinika ny fahavitan'ny milina fambolena izy ireo.